Chencan AT1224AD ATC CNC အသိုက်အခြေပြု Router ရေးစင်တာ - တရုတ်ရှန်ဒေါင်း Chenan Machinery
Chencan AT1224AD panel ကပရိဘောဂထုတ်လုပ်ရေးအတွက်ပရော်ဖက်ရှင်နယ် CNC သည် router စင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အလုပ်လုပ်ဧရိယာနှင့် x, y, z အလုပ်လုပ်အကွာအဝေးအားလုံးသင့်ရဲ့တောငျးဆိုခကျြအပျေါသတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့သင်ရုံ, ကျွန်တော်တို့ကိုသင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ဒါမှမဟုတ်အလုပ်အပိုင်းအစရဲ့အရွယ်အစားကိုပြောပြပစ္စည်းများနှင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏အကြံပြုချက်ပေးလိမ့်မယ်လိုဖောက်သည်-ဒီဇိုင်းဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။
•အလိုအလြောကျ 8-12 tools တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်သည့် Carousel မဂ္ဂဇင်း;
•အီတလီနိုင်ငံ fam အမျိုးမျိုးဒေါင်လိုက်အပေါက်တူးဖော်ခြင်းရဲ့လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်သည့်5+4broing အကြီးအကဲများ;
• mufti-function ကိုရှိထား: routing ကို, တူးဖော်ခြင်း, ဖြတ်တောက်, အစွန်း chamfering စသည်တို့;
•အ worktable ကနေချော panel ကဘုတ်အဖွဲ့တွန်းများနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေစဉ်အတွင်းမြေမှုန့်ကိုစုဆောင်းနိုင်သည့်အလိုအလျောက်တွန်းအားပေး function ကို။ ဤနည်းအားဖြင့်, ကအလွယ်တကူ worktable အပေါ်ခိုင်မာတဲ့စို့ခံရသည့် panel ကဘုတ်အဖွဲ့နှင့်အသစ်နို့တိုက်ကျွေးရေးဘုတ်အဖွဲ့ရြဖို့အော်ပရေတာများအတွက်အလွန်လွယ်ကူသည်,
• X, Y, Z ကိုအလုပ်အဖွဲ့ဧရိယာ: 1200x2400x250mm;
•စားပွဲတင်က Surface: ဖုန်စုပ်စားပွဲ;
• X, Y ဖွဲ့စည်းပုံ: Helical သိုလှောင်ဆင်ဂီယာ, ထိုင်ဝမ် 30, ရထား Linear ဝက်ဝံ;
• Z ကိုဖွဲ့စည်းပုံ: ထိုင်ဝမ် TBI Ball ကိုဝက်အူထိုင်ဝမ် 30, ရထား Linear ဝက်ဝံ;
•မက်စ်။ လျင်မြန်သောခရီးသွားနှုန်း: 65000mm / မိနစ်;
•မက်စ်။ အလုပ်အဖွဲ့မြန်နှုန်း: 45000mm / မိနစ်;
• Drive ကို Motors က: ဂျပန် YASKAWA servo မော်တာများနှင့်ယာဉ်မောင်း;
• Operating System ကို: မူရင်း Syntec ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အ;
သစ်သားပရိဘောဂစက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစား: Wave ကိုပန်းကန်, ဒဏ်ငွေပုံစံ, ရှေးဟောင်းပရိဘောဂ, သစ်သားတံခါး, Screen, ယာဉ်ခါးပန်း, ပေါင်းစပ်တံခါးတို့, ဒါပေါ်မှာဗီရိုတံခါးများ, အတွင်းပိုင်းတံခါးများ, headboards နှင့်;
ယခင်: Wood ကအဘို့အ Chencan MS1325AC4ဝင်ရိုးတန်း ATC CNC Router
နောက်တစ်ခု: Chencan GM3012AH5 Composite ဘုတ်အဖွဲ့ CNC ထုတ်ယူခြင်းရေးစင်တာ
3 ဝင်ရိုးတန်း CNC သစ်သားထွင်းစက်
Wood ကသည် Atc CNC Router
Atc CNC Wood က Router
Atc Wood က CNC Router စက်
Atc Wood ကဖြတ်တောက်ခြင်းစက်
အကောင်းဆုံးဈေးနှုန်း Wood ကတံခါးစက် CNC Router စက် Making
စျေးပေါ Wood က CNC
တရုတ် ATC Wood က Router
တရုတ် Wood က CNC Router
CNC Router Wood ကသည်ဖြတ်တောက်ခြင်း
Wood ကအက္ခရာ တင်. သည် CNC Router
CNC router သို့မဟုတ်သစ်သားထွင်း
CNC Router Wood ကအက္ခရာ တင်. စက်
CNC Wood ကကမ္ပည်းထိုးလုပ်ငန်း
ရောင်းရန် CNC Wood က Router စက်
CNC လက်သမားအက္ခရာ တင်. စက်
CNC သစ်သားထည် Router
နှစ်ချက်ခေါင်းဆောင်များ CNC သစ်သားထည်စက်
Double MUTI ဗိုင်းလိပ်တံလက်သမား CNC စက်
Wood ကသည်လေးဝင်ရိုးတန်း ATC CNC Router
Wood ကသည် High Quality CNC Router
multi ဗိုင်းလိပ်တံ Wood က CNC စက်
multi ဗိုင်းလိပ်တံ Wood က Router
နယူးဒီဇိုင်း Wood က Router စက်
CNC Router ဖြတ်တောက်ခြင်း Polywood
Wood ကတံခါးလုပ်ခြင်းသည်သုံးဝင်ရိုးတန်း CNC Router
သစ်သား4ဝင်ရိုးတန်း CNC router များ
သစ်သားအနုပညာ CNC Router
သစ်သား Atc CNC Router
သစ်သား CNC Router4ဝင်ရိုးတန်း
Wood က Curve CNC Router
CNC Router ဖြတ်တောက်ခြင်းသစ်သား
သစ်သားဒီဇိုင်း CNC Router
Wood ကပြည်ထဲရေး CNC Router
သစ်သားမှို CNC Making
ရောင်းရန်သစ်သား Router စက်
Chencan M1325AH2 နှစ်ချက် CNC Wood ကအလုပ်အဖွဲ့ကြိုတင် ...
Chencan GM3060T Big အရွယ်အစား5ဝင်ရိုးတန်းမှိုထုတ်ယူခြင်း ...